Mid ka mid ah xiddigaha kooxda Man United oo muddo bil ah garoomada ka maqnaanaya – Gool FM
Mid ka mid ah xiddigaha kooxda Man United oo muddo bil ah garoomada ka maqnaanaya
(Manchester) 15 Sebt 2016 – Dhaawac jilibka ka soo gaaray ayuu garoomada muddo bil ah uga maqnaan doonaa daafaca kooxda Manchester United ee Phil Jones.
Kaddib markii uu ku guuldarreysatay inuu ka soo muuqdo safka kooxda koowaad ee Man United tan iyo bishii Janaayo, Jones ayaa ka shaqeeyey inuu si buuxda u soo kabsado, laakiin waxa uu ka maqan yahay shaxda kooxdiisa ee caawa kulan ka tirsan heerka guruubyada Europa League la ciyaari doona Feyenoord, sababo dhaawac.
Waxaa daafacan laga reebay shaxda kooxda Man United ee u safray dalka Holland, halkaas oo ay caawa ku ciyaari doonaan, tababare Jose Mourinho ayaa suxufiyiinta u sheegay in 24-sano jirkaan uu dhaawac ka soo gaaray jilibka intii lagu guda jiray tababarka kooxda.
Jones ayaa la joogay Man United tan iyo sanadkii 2011-kii, laakiin intii lagu guda jiray shantiisii sano oo uu la joogay kooxdan waxa uu kaliya u saftay 140 kulan tartammada oo dhan.
Garsooreyaasha dhex-dhexaadin doona kulammada shanaad ee Premier League oo la shaaciyey
Kooxda usbuuca ee Champions League oo la soo saaray… (Barcelona oo xiddigaha ugu badan ku leh)